Katrina yaa u baahan adigoo Shraddha Kapoor heesatay madaama filimka Dance-ga ah Varun la sameeneyso! – Filimside.net
Katrina yaa u baahan adigoo Shraddha Kapoor heesatay madaama filimka Dance-ga ah Varun la sameeneyso!
January 7, 2019 Zakarie Abdi
Waxaan horey idin kula wadaagnay atirishada Katrina Kaif inay isaga baxday filimka Dance-ga ah oo ay Varun Dhawan la sameyn laheyd xili shaqada filimkan bishan gudaheeda bilaabaneyso ayadoo sheegtay inaysan waqti heli karin sidoo kalena weli ku hawlan tahay dhameestirka filimka Bharat oo ay Salman Khan la jileyso.
Director Remo Dsouza iyo Varun Dhawan oo yaaban waqti badana heesanin waxaa si lama filaan ah u aqbashay inay filimkan weyn sameyso Shraddha Kapoor oo horey kooxdan filimka ABCD 2 ula sameesay taasi oo ka dhigan in waqtiga loogu tala galay duubista mashruucaan bilaaban doonto.
Shraddha Kapoor waxay tiri “Aadban ugu faraxsanahay inaan dib ula midoobo Remo, Prabhu Dehva iyo Varun kadib filimka ABCD 2, waxaana suura gal ka dhigay inay mashruucan kusoo biiro soo saare Bhushan Kumar, waxayna ila wadaageen sheeko cajiib badan oo aan marnaba maya dhihi karin, balse waan ogahay in shaqo badan la iiga rabo filimkana uu yahay Dance waxaana gali doonaa diyaar garow deg deg ah.”
Varun Dhawan ayaa sidoo kale baraha bulshada shaaca kaga qaaday inay Shraddha dib iskula shaqeenayaan wuxuuna yiri “Aadban ugu faraxsanahay in mashruuceena Shraddha kusoo biirtay gacmo furan kusoo dhawaaw, waxaa tahay qof karti badan sidoo kalena shaqo badan.”
Varun Dhawan ayaa filimkan ku jilaayo wiil reer Punjab ah kaasi oo London la keenayo sidoo kalena rabo Dance-ga inuu heer sare ka gaaro halka Shraddha ay garab siin doonto qorshahana wuxuu yahay in filimkan la daawado November 2019 ama qaybaha dambe ee sanadkan.
Waxaa Aqrisay 504